Durba waa run: Xiaomi Mi 11 Lite NE ayaa timid guryaheena | Androidsis
Shirkadda weyn ee tiknoolajiyadda Shiinaha, Xiaomi, ayaa soo bandhigtay taleefan leh qiimo aad u jaban oo loogu talagalay wax kasta oo uu qariyo terminal -kan. Waxay ku saabsan tahay Xiaomi Mi 11 Lite NE, mid ka mid ah dahabkii ugu dambeeyay ee shirkadda Haidian, oo lagu heli karo midabbo aad u yaab badan, oo leh shaashad awood leh, kamarad weyn, oo leh dhammaan awoodda 45, oo leh caato iyo iftiin cajiib ah.
Intaa waxaa dheer, qalabkan hadda waa la jiraa dalabyo gaar ah oo aad awoodid helitaanka halkan. Miyaad seegaysaa?
1 Astaamaha farsamada ee Xiaomi Mi 11 Lite NE
1.5 Nidaamka hawlgalka
1.6 Isku xirnaanta iyo siyaado
2 Sida loo helo Xiaomi Mi 11 Lite NE qiimo dhimis
Astaamaha farsamada ee Xiaomi Mi 11 Lite NE
Xiaomi Mi 11 Lite NE cusub ayaa leh qaar astaamaha farsamada in la yaab in terminal ee qiimaha in. Qaar ka mid ah kuwa ugu caansan waa:
SoC -ga uu terminalkani leeyahay waa Qualcomm Snapdragon 778, mid ka mid ah jibbaarada ugu awoodda badan suuqa dhexdiisa. Chip la soo saaray oo leh 6nm node horumarsan ee TSMC, oo leh 8 xirmooyin wax-qabad iyo weyn.LITTLE tiknoolajiyad oo u qaybisa kooxo 1x Cortex-A78 at 2.4 Ghz oo ah waxqabadka ugu sarreeya, 3x Cortex-A78 at 2.2 Ghz, iyo 4x Cortex -A55 at 1.9 Ghz marka baahida waxqabadku aysan aad u sarayn oo badbaadinta baytarigu ay tahay mudnaanta.
Waxa kale oo ay midaynaysaa mid ka mid ah GPUs ka awood badan, sida Adreno 642L. Sawirada leh dhaxalka ATI / AMD markii shirkadani iibisay qeybta garaafyada guurguura ee Qualcomm, taasina wali waxay ku xukumaysaa halbeegyada ka dhanka ah Mali iyo PowerVR.
SoC ayaa sidoo kale isku daraya dardargelinta kale, sida DSP Hexagon 770, iyo ISP Spectra 570L, iyo sidoo kale adapter network X53, taageerida 5G, Bluetooth 5.2, GPS / GLONASS / Galileo / Beidou, iyo laba nooc oo aad kala dooran karto , leh 6 iyo 8 GB ee LPDDR4X RAM.
Sida xusuusta ugu weyn, waxaad ku dooran kartaa noocyadii 128 GB nooca UFS 2.2, si aad u kaydiso tiro badan oo faylal iyo barnaamijyo ah, oo leh xawaare marin toos ah oo toos ah.
Shaashadda Xiaomi Mi 11 Lite NE waa 6.55 ”FullHD + (2400x1080px), oo leh cabbir aad u weyn si aad ugu raaxaysato qulqulka, ciyaaraha fiidiyaha, ama si raaxo leh u akhrido. iyada guddigu waa AMOLED, kaas oo dammaanad qaadaya nadiifnimada midabka oo aad u wanaagsan iyo gabi ahaanba madow saafi ah, iyo sidoo kale caawinta yareynta isticmaalka batteriga.
Bandhigani wuxuu leeyahay 10-bit TrueColor, oo loogu talagalay hodanka midabka weyn, iyo taageerada Dolby Vision iyo HDR10. Waxay bixisaa wax aan ka yarayn 1.07 bilyan oo midabbo leh oo si sax ah u jira. Marka la eego heerka cusboonaysiinta, waa 90Hz, oo ku habboon ciyaarta iyo fiidiyaha.
Waxay sidoo kale ka fikireen adkayntiisa, maadaama ay ku ilaaliyeen lakab leh farsamo Qurxinta Corilla Glass 5. Waad ku mahadsan tahay, moobiilku wuxuu u adkeysan doonaa dhicitaankiisa xitaa si ka wanaagsan isagoo aan jabin, marka lagu daro inuu ka xoog badan yahay xoqidda.
Kaameeraha Xiaomi ayaa sidoo kale taagan. Si aad u noqoto mobeel leh qiima celcelis ah, waxay leedahay kamarad gadaal leh oo leh 64 Dareeraha dareeraha, 1 / 1,97 "iyo f / 1.79. Waxay kaloo leedahay 8 MP labaad xagal ballaaran f / 2.2 dareere, 119º sawirro ballaaran. Dareenka saddexaad ee lagu daray waa 5 MP f / 2.4 makaro.
Marka laga hadlayo kamaradda hore, sidoo kale ma gaabinayso, maadaama ay rakibeen a 20 MP oo awood badan leh oo loogu talagalay selfies iyo wicitaanada fiidiyaha.
Si loo helo madax-bannaani fantastik ah oo saacado badan leh, Xiaomi Mi 11 Lite NE wuxuu leeyahay batari Li-Ion ah 4250 Mah awood. Intaa waxaa sii dheer, waxay taageertaa ku dallacsiinta degdegga ah ee 33W, markaa uma baahnid inaad sugto waqti dheer si ay u dhammaystirto markaad degdegsan tahay.
Kala xisaabtan Android 11 oo leh lakab MIUI 12 ah. Nidaamka hawlgalka ee nooc aad u cusub oo leh hawlo fara badan oo loo diyaariyey codsiyada ugu badan. Intaa waxaa dheer, Xiaomi waxay kuu leedahay nidaam aad ku hesho cusboonaysiinta ugu dambeysay ee OTA. Habkan, waxaad heli doontaa sharooto amni oo ugu dambeeyay oo la heli karo.
Marka laga hadlayo isku xirnaanta, waxay leedahay USB-C oo lacag lagu dallaco, WiFi 6 si loogu xiro shabakadda xawaaraha ugu sarreeya, Bluetooth 5.2, NFC, GPS isku dhafan, isku xirnaanta xogta 5G, akhristaha farta dhinaca, sidoo kale waxay taageertaa adeegsiga DualSIM. Dabcan, wuxuu isku daraa makarafoon iyo codka stereo tayo leh.
Naqshadeynta Xiaomi ayaa si fiican u dhammaatay. Iyadoo leh astaan ​​aad u caato ah, miisaan fudud, oo leh muuqaal aad u soo jiidasho leh, iyo sidoo kale aad u yar, sida caadiga ah badeecadaha sumaddan. Cabbirkiisuna waa 160.53 × 75.73 × 6.81mm oo culeyskiisu yahay 158 garaam oo keliya.
Waxaad ka heli kartaa afar midab kala duwan:
Truffle Black (madow)
Bubblegum Buluug (buluug)
Peach Pink (casaan)
Baraf cad (cad)
Waxaa ugu dambeeya iyaga gaar ahMaaddaama ay leedahay dusha sare oo u eg muraayad barafoobay oo leh midab matte ah, laakiin leh faahfaahinta baraf -barafka oo ka soo ifaya xaglo gaar ah marka iftiinku ku dhaco.
Sida loo helo Xiaomi Mi 11 Lite NE qiimo dhimis
Haddii aad rabto iibso Xiaomi Mi 11 Lite NE qiimo dhimis, ayaa hadda laga heli karaa adduunka oo dhan, iyo meel ka horreysa meel kasta, oo ku taal shirkadda weyn ee iibisa Aasiya ee Aliexpress. Qiimayaasha aan jaban ee aaladahaan waa:
Xiaomi Mi 11 Lite NE 6 GB oo RAM ah iyo 128 GB oo xusuusta gudaha ah - € 379
Xiaomi Mi 11 Lite NE 8 GB oo RAM ah iyo 128 GB oo xusuusta gudaha ah - € 399
Halkii, la kuuboon dhimis 09ESOW25 Waxaad ku heli kartaa € 25 ka yar, taas oo ah, qiimaha ugu dambeeya waa:
Xiaomi Mi 11 Lite NE 6 GB oo RAM ah iyo 128 GB oo xusuusta gudaha ah - € 334
Xiaomi Mi 11 Lite NE 8 GB oo RAM ah iyo 128 GB oo xusuusta gudaha ah - € 379
Si aad uga faa'iidaysato dalacaadkan waad samayn kartaa guji halkan oo hadda ka iibso Aliexpress, Ha seegin fursadda!
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Durba waa run: Xiaomi Mi 11 Lite NE ayaa timid guryaheena